मोदी नेपाल आउन लाग्दा रबि लामिछानेले दिए २४ घन्टे यस्तो अल्टिमेटम ..::सुनौलो न्यूज
मोदी नेपाल आउन लाग्दा रबि लामिछानेले दिए २४ घन्टे यस्तो अल्टिमेटम ..
सरकार रमिता देखाँउदै छ । जहाँ जहाँ मोदी पुग्छन् त्यहाँ त्यहाँ नक्कली बिकास देखाइरहेका छन् । चाकडिको यो हदले शोभा दिएन । ४ बर्षदेखि नबनेको सडक ४ दिनमा बन्न सक्ने रहेछ भने ४ बर्ष जनतालाई किन दुख दिएको ?
यो देश र यस देशका सडकहरु २ दिन आउने मोदी जी लाई काम लाग्छन् कि जीवन भर हिड्ने तपाई हामीलाई ? २ दिन आउने मोदी हिड्ने बाटोमा फुलै फुल, यसै क्षेत्रका नागरीक दैनिक हिड्ने बाटोमा हिलै हिलो धुलै धुलो ?
रातारात बाटो बनेको पिच भएको कुराको विरोध गरेको होइन तर नेपाली जनता र तिनले पुस्तै पुस्तासम्म पाएको दुख र कष्ट चाही प्राथमीकता नपर्ने ? २ दिने पाहुना चाही त्यती धेरै प्राथमिकतामा पर्ने ?
१० बर्ष नबनेको सडक रातारात बनेको राम्रो हो तर करोडौ खर्च गरेर हस्याङ र फस्याङ गरी बनाएको सडक मोदी जी इन्डीया नपुग्दै विग्रीया भने राज्य कोषबाट खर्च भएको करोडौं पैसा कसले व्यहोर्ने ?
२÷४ दिनमा ज्यादै बलियो बाटो बनाउन सक्नेहरु ४ दशकसम्म कुन दुलोमा लुकेका थिए त ? हो पाहुना आउँदा घरका भान्सा बैठक, आँगन सफा गरिन्छ र गर्नु पनि पर्ला तर अरु बेलामा चाही झिंगा भन्किने नाली गनाउने भाँडाकुडा जुठै राख्ने, धुलो मैलौ फोहोरको डंगुर ढोकामा राख्ने तर पाहुना आउना साथ रातारात चम्काउने चलन त अचच्मको भएन र ?
४ दिनमा बलियो, टिकाउ सडक बनाएकै हो भने सरकार मोदी जीलाई २ दिन अझै राखौँ । एक दिन थानकोट नागढुङगा को बाटो हुँदै मुग्लिन नारायणगढको बाटो पनि हिडाआँै । नेपाली जनताको सुखसँग त तपाईहरुलाइ एक प्रतिशत पनि मतलब छैन भन्ने कुरा बर्षौदेखि देखाई सक्नु भो मोदी जीलाई नाकमा धुलो छिर्ला र मोदीको पाउमा हिलो लाग्ला भनेर यो बाटो पनि रातारात बन्थ्यो कि ?
चावहिल चुच्चेपाटी हुँदै हायात होटल सम्मको बाटो मात्र बन्दै छ । बौद्ध जोरपाटी, गोकर्ण हुदै साँखुसम्मको रुट बनाइदिए दशकौँ देखि हेपेर बर्खामा रोपाइ गर्न मिल्ने बाटो पनि कालो चिल्लो हुन्थ्यो कि ?
मोदी आउने भैसकेपछि उनको नागरीक अभिनन्दका लागि १ करोड २६ लाखको मञ्च रातारात बन्दै छ । अर्को २ दिन मोदी जीको भ्रमण थपौ र मोदी जीलाई भुकम्प पीडितका बस्तीमा पु¥याउने कार्यक्रम पनि थपौँ ।
३ बर्षदेखि अस्थायी टहरामा बसेका गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा धादिङ आदी ठाँउका भुकम्प पीडितका घर पनि रातारात बन्थे की ? किन भने जसरी खाल्डो परेका, हिलो जमेका र धुलो उड्ने सडक मोदी जीलाई देआउन हुँदैन त्यसरी नै ३/३ बर्षसम्म बन्न नसकेका भुकम्प पीडितका अस्थायी छाप्रा पनि देखाउने कुरै आएन ।
केही दिन मोदी जीको भ्रमण थपिदाँ देशै बन्ने सम्भावना भएकाले यो अनुरोध भारतीय दुतावास मार्फत नयाँ दिल्लीलाई गरेका छौँ । र लाष्टमा एउटा महत्वपुर्ण अनुरोध, भुकम्पले थला परेका बेला भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् ।
यसबारेमा माफी पनि नमाग्ने केही पनि नबोल्ने कुटनीतिक योजना बनेको छ भने बदल्नुहोस, अझै ४८ घण्टा बाँकी छ । तपाईको माफीले हाम्रो तितो भोगाइ त बदलिदैन तर सारा नेपाली जनता यहि बिषयमा तपाईको भनाइ के आउँछ भनेर कुरेर बसेका हुन्छन् ।
बाँकी अरु कुनै कुरामा कसैको केही ईन्ट्रेन्स्ट हुने वाला छैन् । वि क्यान फरगिभ बट वि क्यान नट फरगेट द वल्केड ।
श्रोत – न्युज२४